Using kasper6without serial keys :D — MYSTERY ZILLION
Using kasper6without serial keys :D
- thw windows security center will tell you that the firewall or\_and antivirus is not working ... bec you made the kasper seemed unactiviated.....
I already test with kasper7& 8! This method is not work completely! I think it work only on kasper 6... Be enjoy with this way...
အခု kaspersky 8 တောင် ရှိနေပြီ key တွေကလဲ ရှာလို့ရနေတာပဲ။ kaspersky6ကိုဆက်သုံးနေတာ။ တစ်ချို့သူတွေက version7ကိုသုံးနေတာ။ အဲ့ဒါတွေမှာ ဘယ်လိုကွာခြားချက်တွေရှိလို့လဲ။ နောက်တစ်ခုက ဥပမာ။ ။ kaspersky ချင်းမယှဉ်ပဲ တခြား (ဆိုပါစို့) NOD 32 version အဟောင်းထက် kaspersky7ကပိုကောင်းတယ်လို့လူတွေကပြောကြတယ်။ ဒါဆို အခု version အသစ် ESET4နဲ့ဆိုရင်ကော။ နဲနဲရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာ။
အခု kaspersky 8 တောင် ရှိနေပြီ
အခု ကက်စပါက 8 မကပါဘူး... Kaspersky 2009 တောင်ထွက်နေပါပြီ..ဗားရှင်းနဲ့ပြောရင်တော့ 9.0 ပေါ့....
ကက်စပါ7ကတော့ နဲနဲပိုကောင်းတယ်ထင်ပါတယ်....ကက်စပါ6နဲ့ ကက်စပါ7က အက်ပ်ဒိပ်လုပ်ပုံခြင်းတူဘူးထင်တယ်...6 ကပိုလွယ်မယ်ထင်တယ်....ကျွန်တော်ကတော့ ကက်စပါ 7.0 ကိုပဲကြိုက်တယ်....ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်မိကိုမိတယ်... avir တို့ဘာတို့သုံးတဲ့ ဟိုမဟုတ်တရုတ်(တရုတ်မဟုတ် ) မောင်ပြုံးတို့လိုဟုတ်ဘူး...ကက်စပါသည်သာအကောင်းဆုံးပဲ.... )
ကိုကိုဝင်းရေ ဟုတ်သေးဘူးထင်တယ် Kaspersky 2009 ဆိုတာ kaspersky version 8.0 လို့ကျွန်တော်သိထားတာပါ။ 9.0 မထွက်သေးပါဘူး။
ဒီနေရာ ဗားရှင်းအသစ်တွေ ဘာကြောင့်ထွက်ပြီး ဘာကြောင့် အချို့က ဘားရှင်း အဟောင်းတွေကိုပဲ သုံးနေကြတယ်ဆိုတာနဲ့ ပိတ်သတ်ပြီး နည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးကြည့်ပါမယ်။
ဥပမာ- MS ရဲ့ version4ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ window 95 ပေါ်လာတယ်။ လူတွေအားလုံး အထူးနှစ်ခြိုက်ကြပြီး သုံးစွဲကြတယ်။ နောက် ၀င်းဒိုး98 ထက်ထွက်တယ်။ ဒီလိုပဲ ပြောင်းသုံးကြတယ်။ နောက်ပိုင်း ၀င်းဒိုး 2000 & ME ထွက်တယ်။ XP ထွက်တယ်။ အခုဆိုရင် vista ထွက်တယ်။ window7 ထွက်တယ်။ အကောင်းဆုံးက window7ဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်။ ဘာလို့ ၀င်ဒိုး XP ကို လူသုံးအများဆုံး ဖြစ်နေတာလဲ။ အဲဒီလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကောင်းတိုင်း လိုက်သုံးကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေက ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေရာ ပြေကြောင်းလေးတွေပဲ သုံးနေကြတာပါ။ kasper ဆိုလည်း အဲဒီအတိုင်းပါပဲ။ နောက်ဆုံး ဘားရှင်းဖြစ်တဲ့ kasper 8 (ယခင်က kasper ကို နံပါတ်လိုက် ထုတ်ခဲ့သော်လည်း kasper 8 တွင် kasper 2009 အဖြစ်ပြောင်းလဲ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။) က ကောင်းတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗားရှင်းအဟောင်းတွေကို သုံးနေကြဆဲပါပဲ။ ယုံမလားတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းက စက်တွေမှာ kasper4 တင်ထားတာ..... :P
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတဲ့ သုံးလို့ကောင်းတဲ့ ဟာကွက်လေးတွေ ရှိလို့ပါ။ kasper7 ကို trail version နဲ့ တသက်လုံး သုံးလို့ ရအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ kasper6ကြတော့ ကျွန်တော်ပြောတဲ့နည်းဆို update ကို menual လုပ်ပေးရုံကလွဲပြီး ကျန်တာဘာမှ လုပ်စရာတောင် မလိုတော့ဘူး။ ထုတ်လုပ်သူတွေဘက်ကလည်း သူတို့ပစ္စည်းကို ပိုကောင်းအောင် အမြဲလုပ်နေတဲ့အပြင် ပိုပြီး မ၀ယ်မနေရ ၀ယ်သုံးအောင် လုပ်နေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် version အသစ်တွေက ပေါ်လာဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တိုင်း အမြဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော..........
kaspersky ချင်းမယှဉ်ပဲ တခြား (ဆိုပါစို့) nod 32 version အဟောင်းထက် kaspersky7ကပိုကောင်းတယ်လို့လူတွေကပြောကြတယ်။ ဒါဆို အခု version အသစ် eset4နဲ့ဆိုရင်ကော။
ပြောတာ ကျန်ခဲ့လို့ ဖောလက်စနဲ့ ဆက်ဖောလိုက်ဦးမယ်.....
အဲဒါကတော့ ကပ်စပါ ကြိုက်တဲ့လူ ပြောတဲ့ စကားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ nod32 သမားနဲ့တော့ ရန်ဖြစ်မဲ့ ပွဲပဲ....
အဓိကတော့ စိတ်ပါပဲ။ အရင်ဆုံး သုံးဖူးတာကို အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ (အချစ်ဦး မြေးဦးရတောင် မမေ့ဘူးတဲ့။ မယုံရင် အဖိုးကို မေးကြည့်... :d)
အဲဒါတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသုံးဖူးတာ AVG ဗျ။ အခုလှည့်မကြည့်ချင်လောက်အောင်မုန်းသွားတာပါ။ ဘာလို့ဆိုတော့ သူကိုယ်သူတောင်မကာကွယ်နိုင်လို့ပါ။ မှန်မှန် update လုပ်ပေးနေတာတောင် သူ့ AVG ကြီးကို အကိုက်ခံလိုက်ရပြီး Update လုံဝလုပ်လို့မရကတည်းကစိတ်နာပြီး kasper ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။